Indandatho yobumba eyenziwe yensimbi embozwe ukufakwa kensimbi China Manufacturer
Jinghui Industry Ltd. [Hunan,China] Uhlobo lwebhizinisi:Manufacturer Amakethe Omkhulu: Americas , Asia , Europe , Worldwide Ngaphandle:71% - 80% Izikweletu:ISO9001, FDA Incazelo:I-Ceramic Ring Itholwe Nge-Metal Plating,Ukulungisa indandatho ye-Ceramic,Indandatho Yokubumba Ka-Metallised
Home > Imikhiqizo > I-metallized ceramics > I-Metallized Ring Ceramic > Indandatho yobumba eyenziwe yensimbi embozwe ukufakwa kensimbi
Imihlangano yama-Ceramic-to-iron brazed is a application ejwayelekile kakhulu ku-high yamanje, voltage ephezulu, application high vacuum application. Ngemuva kwalokho, insulin ye-ceramic insulator idlala indima ebalulekile kuyo. UJinghui unikeza i-varity ye-ceramics eqondile ye-aluminium oixde ceramics yezempi, yezokwelapha kanye ne-aerospace.
Indlela esetshenziswayo yokwakha indandatho yobumba eyenziwe yensimbi esiyimboza icindezelwa eyomile, ngokucindezela okushisayo, injekishini yokubumba yobumba nokunye. Usayizi omncane wengxenye kuya kosayizi omkhulu kakhulu wengxenye uyatholakala ukukhiqiza. Ukubeka okujwayelekile esikunikeza ikhava ngalendlela elandelayo:
1. Indandatho ka-ceramic ecijile + Mo / Mn metallization
2. Indandatho ka-ceramic ecijile + Mo / Mn (W) metallization + Natingle plating
I-3.Raw ring ye-ceramic + W metallization + Au plating
Singakwazi ukusekela i-prototyping kanye ne-R&D yamacala amancane kakhulu we-batch ukukhiqizwa kwevolumu ephezulu ngesikhathi esifushane.
I-alumina ceramics ehlobene
Kade sikhiqiza uhla olubanzi lwe-ceramics enezinsimbi, kufaka phakathi ukufakelwa kobumba kwe-ceramic for feedthrus,
amasilinda e-ceramic we-vacuum abaphazamisayo, izingxenye ze-ceramic zamashubhu e-X-ray nokunye.
1. Sinezinto zangaphakathi zokukhiqiza zobuciko zasendlini, kubandakanya imishini yokugaya & yokuxuba
yokulungiselela izinto ezibonakalayo, ukukhethwa kwemishini yokubumba, isithando somlilo, imishini yokugaya kahle, imishini ye-CNC,
umugqa wokukhiqizwa kokwelashwa okuphezulu (ukusonga, ukubeka phansi, ukwenza insimbi) kanye nomugqa wokukhiqiza we-electroplating.
2. Senza ngokuqinile uhlelo lwekhwalithi yokuphatha nge-ISO9001: 2015 nayo yonke iminyango ye-IQC, IPQC, OQC
ube nezinduku ezingamavila nezingcweti. Zonke izingcezu zigelezela kumakhasimende ziye zahlolwa ngamandla.
3. Izindleko - ezisebenzayo kungenye futhi okugxilwe kuyo esikhungweni sethu, sinaka kakhulu yonke imininingwane kusuka ekuthengeni
okusetshenziswayo kokuthumela kanye nokucabanga ukuthi ungazinciphisa kanjani izindleko ngaphambi kokuqinisekisa ikhwalithi.
Ama-FAQs (Imibuzo ebuzwa njalo)
Q 1. Ingabe uyinkampani yezimboni noma yokuhweba?
A: Singumkhiqizi oqondile onesipiliyoni seminyaka engu-15 se-OEM, ODM. Wamukelekile ukuthi uvakashele ifektri yethu.
Q 2: Ngabe uthumela isampula ukuze uhlole ikhwalithi?
A: Impela, amasampula ajwayelekile anesitoko amahhala nokuqoqwa kwemithwalo.
Samukela nesivivinyo sesilingo / i-oda lesampula lezingxenye ze-ceramic ze-ceramic zirconia ukusekela izidingo ze-prototyping.
Q 3: Ingabe uyatholakala ukunikeza imikhiqizo eyenziwe ngezifiso?
A: Yebo, sisekela izingxenye ezenziwe ngobumba ze-zirconia ezenziwe ngokwezinto zokwakha ezahlukahlukene, ubukhulu, kanye nemiklamo.
Q 4: Uqinisekisa kanjani ikhwalithi ngaphambi kokuthumela?
A: Ukuhlolwa kwamasampula i-batch ngayinye kufanele ngaphambi kokuthumela. Inani le-KPI kanye ne-QAL ejwayelekile zisebenza inqubo ngokuqinile.
Q 5: Yimiphi eminye imikhiqizo obhekene nayo?
A: Asakhiqizi kuphela izakhi ezenziwe ngobumba ezenziwe ngensimbi, kepha asakhiqizi i-cry yokugaya i-ceramic, uphawu lwezimpawu zobumba nokunye.
I-Ceramic Ring Itholwe Nge-Metal Plating
Ukulungisa indandatho ye-Ceramic
Indandatho Yokubumba Ka-Metallised
I-Ceramic Ring ene-Metallization
I-Alumina Ceramic Ring ene-Metallization
I-Ceramic Ring Itholwe Nge-Metal Plating Ukulungisa indandatho ye-Ceramic Indandatho Yokubumba Ka-Metallised I-Ceramic Ring ene-Metal Coating I-Ceramic Circle ene-Metal Plating I-Ceramic Ring ene-Metallization I-Ceramic Ring ene-Nickle Plating I-Alumina Ceramic Ring ene-Metallization